Chelmo - ညီမ၊အစ်မက အကောင်းဆုံး သူငယ်ချင်းဖြစ်စေတဲ့ အချက်(၇)ချက်
ညီမ၊အစ်မက အကောင်းဆုံး သူငယ်ချင်းဖြစ်စေတဲ့ အချက်(၇)ချက်
သူက ကိုယ့်ထက်ကြီးသည်ဖြစ်စေ၊ငယ်သည်ဖြစ်စေ ညီအစ်တွေဆိုတာ လောကဓံတရားကိုအတူဖြတ်ကျော်မှာပါ။
နှစ်ယောက်က အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းတွေကြောင့် ဘယ်လောက်ပဲအငြင်းပွားနေပင်မယ့်လည်း လောကကြီးက တို့နှစ်ယောက်ကို ဘ၀မှာအတူတူနေထိုင်ဖို့အတွက် သတ်မှတ်ပေးပြီးသားပါ။ သူက မိသားစု ၀င်ဖြစ်ရုံသာမက သူငယ်ချင်းကောင်းဆိုလည်း ဟုတ်တယ်။ သူကကိုယ့်အတွက် သူငယ်ချင်းကောင်းဟုတ်မဟုတ် ဆိုတာ အောက်က အချက်(၇)ချက်နှင့် စစ်ဆေးကြည့်လိုက်ပါ။
၀၁. သူ့ကို ဘယ်အကြောင်းအရာကိုမဆိုတိုင်ပင်လို့ရတယ်။
ဘယ်လိုအရာတွေဖြစ်လာလာ သူကတော့ ကိုယ့်အတွေးထဲမှာ ပထမဆုံးစဉ်းစားမိသူပါ။ သူငယ်ချင်း အချင်းချင်းအဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စဖြစ်ဖြစ် (ဒါမှမဟုတ်) ယောက်ျားလေးနဲ့ အဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စဖြစ်ဖြစ် ရှိလာမယ်ဆိုရင် သူက အခက်အခဲတွေ၊အဆင်မပြေမှုတွေအကုန်လုံးကို နားထောင်ပေးဖို့အဆင်သင့် ရှိနေမှာပါ။
၀၂. အင်္ကျီတွေလည်း အတူတူမျှဝတ်လို့ရတယ်။
အဲဒါကြောင့် တစ်ခါတလေ တစ်ယောက်အ၀တ်အစားတစ်ယောက်ညီတူညီမျှဝတ်တာထက် ဒီအတိုင်းယူဝတ်လိုက်တာ ပိုများပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူရဲ့အပြာရောင်အင်္ကျီလေးကို ဝတ်လိုက်ရင် အရမ်းချစ်စရာကောင်းနေလိမ့်မယ်။
၀၃. ပေါတောတောလုပ်ရပ်တွေကို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လက်ခံပေးနိုင်တယ်။
နှစ်ယောက် အတူတူပေါတောတောလုပ်လို့ရသလို အဲဒီ့လိုလုပ်ရပ်တွေကိုလည်း အပြည့်အ၀လက်ခံပေးနိုင်တယ်လို့ ခံစားရတယ်။ တစ်ခါတလေ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် စနောက်ရာကနေ အနည်းငယ်ခံစားရတာရှိကောင်း ရှိနိုင်တယ်လေ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလိုတွေကြောင့် ကိုယ့်မှာ မျှော်လင့်ချက်တွေတော့ မထားတတ်ဘူး။ ညီအစ်မတွေ ဖြစ်နေတာကြောင့်ပေါ့။
၀၄. တစ်ယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံကနေ တစ်ယောက်က သင်ယူလို့ရတယ်။
ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကတော့ တူညီကြပေမယ့် ဖြတ်သန်းခဲ့ရပုံကတော့ တူညီချင်မှတူလိမ့်မယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကနေ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အကြံဥာဏ်တွေ မျှဝေနိုင်တာကြောင့် တကယ်ကို အားကိုးရပါတယ်။
၀၅. အမြဲ အတူတူ ဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်လို့ရပါတယ်။
အရှိအတိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းထဲက ဓာတ်ပုံဖိုင်ရဲ့၉၈ရာခိုင်နှုန်းက ညီမနှစ်ယောက်ပုံတွေပါပဲ။
၀၆. သူနဲ့ဆို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုလို့ရပါတယ်။
ဒီနှုတ်ခမ်းနီရောင်လေးက ငါနဲ့လိုက်ရဲ့လား။ ငါ ဒီစကတ်ကို ဒီညပွဲကို ၀တ်သွားသင့်လား။ အဲဒီလိုမေးခွန်းမျိုးတွေကို သူသာလျှင် အပွင်းလင်းဆုံး အကြံပေးမှာပါ။
တစ်ခါတလေ ညီမ၊အစ်မနဲ့ စိတ်အခန့်မသင့်စရာကြုံလာပေမယ့် သူမမရှိပဲ သင့်ဘ၀ကိုဘယ်လိုပုံဖော်ရမှန်း မသိဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ သူအခက်အခဲကြုံလာချိန်မှာ သူ့အတွက်ရပ်တည်ပေးသလို သူကလည်း ကိုယ့်ကို ကူညီဖို့ရန် အသင့်ဖြစ်နေမှာပါ။
ကဲ ညီအစ်မတွေက သူငယ်ချင်းကောင်းတွေ(BFFs)လား။
သိမ့်ထူးစံ ( သီလဝ )